Kalandriha momba ny vaksiny ho an'ny ankizy
Online calculators / From Poster
\_ Vaccination (avy amin'ny lata Vaccus - cow) na ny fitsaboana - ny fampidirana fitaovana antigène mba hampidirana ny tsy fahampian'ny aretina, izay hisorohana ny aretina na hampihenana ny voka-dratsiny. Ny fitaovana ampiasaina avy amin'ny antigène dia: miaina, saingy mihamalemy ny mikraoba; maty (mikiky); fanadiovana, toy ny proteinina mikraoba; Ny vaksinin'ny synthetic dia ampiasaina ihany koa. Kalandriezy fampidiran-dra ny zaza iray ...
Kalandriha momba ny vaksiny ho an'ny ankizy Read full »
Kalandrie andro tsara
"Andro fialan-tsasatra" - ireo andro faran'izay kely indrindra ho an'ny bevohoka. Ny andro azo antoka dia 2 ny andro alohan'ny fikarakarana ny fotoana sy ny 2 ny ampitson'iny. Raha te hanombantombana ny fotoanan'ny ovulation, ary manombana ireo andro izay tsy ahafahanao bevohoka, dia tokony ho fantatrao ny faharetan'ny vanim-potoanan'ny ratra. Raha misy fiovan'ny tosi-drà tsy mety, dia tsy azo atao mihitsy ny manombana "andro tsara". [wpcalc ...
Kalandrie andro tsara Read full »
Mpandrindra ny fitondrana vohoka, ny famaritana ny datin'ny fahatsiarovana, ny fitomboan'ny zaza ao amin'ny trimès voalohany sy faharoa amin'ny maha-bevohoka sy ny fe-potoana.
Ny fiterahana dia fitondran-tena manokana amin'ny vatan'ny vehivavy iray, izay misy embryon na zaza mitombo ao amin'ny taovam-pananahany. Ny zanakao dia mitombo avy amin'ny haben'ny pensilihazo eo amin'ny 7 / 8 pounds amin'ny herinandro 40. Ity kisary bevohoka ity dia ahafahanao mamaritra ny datin'ny fahatsiarovana, ny fivoaran'ny zaza ao amin'ny trimès voalohany sy faharoa amin'ny maha-bevohoka sy ny teny. [wpcalc id = 777]